Blouse Factory | Mpanamboatra blouse ambongadiny, mpamatsy
Vehivavy OEM / ODM Batwing Sleeve dia mamadika ny bokotra eo anoloana amin'ny bokotra blouse Stripe Poplin Blouse Blouse an'ny vehivavy ho an'ny fahavaratra
Akanjo lava fohy fohy lava, lapel ary famolavolana bokotra eo aloha, lamba poplin mamelombelona sy mahazo aina. Akanjo miloko manga dia lamaody sy lamaody isan'andro.
Damaody maoderina sy vehivavy tsara tarehy Allover pirinty Atsimbadika ny bokotra eo alohan'ilay bokotra blouse printy
Ity lobaka V-neck vita kanto ity dia ampifanarahana amin'ny pirintin'ny vehivavy kanto amin'ny endriny rehetra, manampy fahatsapana haitraitra amin'ny akanjo. Fomban'olom-bolo, ahazoana aina, mety amin'ny akanjo isan'andro.
BL80031 New design Wholesale women anti-pilling cool malefaka tampon blouse chiffon shirt ho an'ny vehivavy blouse mahazatra Spring spring blouse women
Blouse chiffon vehivavy misy lapel sy bokotra eo aloha. Ny blouse chiffon dia mahazo aina amin'ny andro mafana. Maizina sy mifoka rivotra izy io. Ny lava tanana dia azo ahodina mba hifanaraka amin'ny fomba samihafa. Izy io dia mety amin'ny fampifangaroana amin'ny jeans lamaody na pataloha mahazatra mba hampisy lamaody lamaody.
Ny endri-javatra lehibe dia ahitana:
Karazana maody: mahazatra
Andininy: bokotra eo aloha
Halavan'ny tanany: tanany lava
Vanim-potoana: lohataona / fararano
Composition: fibre polyester 100%
BL80006 ambongadiny pulter size halter women ambony blouse chiffon tsy misy tanany ho an'ny fahavaratra
Mahatalanjona tsy misy tanany, tampon-tendany hatoka, mahasarika anao kokoa. Mitondra fahatsapana milamina sy mahazo aina amin'ny fahavaratra mafana. Mora ampifanarahana ary milay ny mitafy. Tena mety amin'ny toetr'andro mafana izy io, azonao atao amin'ny moron-dranomasina na miantsena. Asehoy ny fombanao mahafinaritra.
Karazana: Akanjo Chiffon tsy misy tanany
Karazana habe: mahazatra
Fikarakarana akanjo: fanasana tanana
Karazan-tànana: Tsy misy tanany
Varavarana: voahangy avo
Fomba: lamaody, Sexy
Fotoana: akanjo isan'andro, fiantsenana, fety, dihy, klioba, Pub, fialantsasatra, morontsiraka
Endri-javatra: Mahafinaritra ny mitafy, miloko marevaka, mavesatra, mahazatra
BL80118 namboarina vehivavy 2021 kanto tanany lava volo blouse vehivavy ambony blouse
Ity tampony malalaka ity dia vita amin'ny chiffon marefo sy malefaka. Ny ondana kely amin'ny akanjo dia manasongadina ny endrika spatial manaitra, izay fironana mafana indrindra amin'ity vanim-potoana ity. Ny vozona dia voaravaka kofehy azo zakaina, izay azo afatotra amin'ny fomba maro. Ny palitao dia mifatotra amin'ny bokotra flap. Ity fanjairana vehivavy sy kanto ity dia hifanaraka tanteraka amin'ny zipo midina sy pataloha malalaka.
Manantena izahay fa afa-po amin'ny vokatray ianareo! Ho an'ny mety indrindra, azafady mba jereo ny latabatra habe amin'ny antsipiriany.
Karazana lamina: Lemaka
Halavany: Tsy tapaka
Andininy: Frill, Front Button
Tenda: vozony mifamatotra
Halavan'ny tananao: Sleeve lava
BL870003 2021 Akanjo fehiloha leoparda pirinty vehivavy vaovao
Ny endrik'ity lobaka ity dia malaza sy lamaody, fomba bokotra V-vozon'ny klasika ary fomba tsy miangatra, mahazo aina. Ny fanontana tsara tarehy dia manampy fatratra amin'ny haingo amin'ny akanjo, mahatonga ny akanjo ho tsara tarehy kokoa, mitondra hatsaran-tarehy kanto ary manome anao toe-tsaina bebe kokoa. Ity top ity dia lasa safidy mety indrindra amin'ny akanjo isan'andro. Izy io dia azo ampifandraisina mora amin'ny jeans, leggings na short.
-Ny biby, fanontana feno
-Mitsimoka & Lavo
BL88004 lamaody blouse satin top women blouse lava lava vita amin'ny satin
Topy maso Dingana fohy Vondron-taonany: olon-dehibe Miralenta: Vehivavy Karazan-vokatra: Blaosy sy tampon'akanjon'ny halavany: Karazan-dava lava: Kavina matevina: Halavan'ny tanany ambany (cm): Haingo feno: ...
Blouse vehivavy BL88003 OFISIALY blouse classy blouse vehivavy lava lava
Topy maso Dingana fohy Vondron-taonany: olon-dehibe Miralenta: Vehivavy Karazan-vokatra: Blaosy sy tampon'akanjon'ny halavany: Karazan-doko tsy tapaka: Valahana matevina: Halavan'ny tànana (cm): Haingo feno: ...
BL830034 trano fivarotana mora vidy plus chiffon patchwork fifanarahana loko vehivavy blouse tampon-birao sy blouse ho an'ny vehivavy
Topy maso Dingana fohy Vondron-taona: olon-dehibe lahy sy ny vavy: Vehivavy Karazan-vokatra: Blaosy sy tampon'akanjo halavany: Karazan-maodely tsy tapaka: Fehin-kibo vita amin'ny fehin-kibo: Halavan'ny tanany vita amin'ny volony (cm): Haingo feno ...
BL830004 vidiny ambany amin'ny blouse leopard vehivavy sy tampon akanjo lava miampy chiffon blouse mahazatra vehivavy lamaody ho an'ny lohataona
Topy maso Dingana fohy Vondron-taona: olon-dehibe lahy sy ny vavy: Vehivavy Karazan-vokatra: Blaosy sy tampon'akanjo halavany: Karazan-maodely tsy tapaka: Leoparda vozon'akanjo: Lava tanana lava voahodina (cm): Decorat feno ...
BL830033 miampy haben'ny voninkazo fanontana voninkazo tampon-tampon'ny chiffon blouse mampihena ny tendany fohy akanjo lava an'ny vehivavy
Topy maso Dingana fohy Vondron-taona: olon-dehibe miralenta: Vehivavy Karazan-vokatra: Blaosy sy tampon'akanjon'ny halavany: Karazan-maodely tsy tapaka: Volom-boninkazo: Halavan'ny tananao voahodina (cm): Haingo fohy ...
BL830032 lamaody eropeana fanaovana pirinty voninkazo lava tanany chiffon blouse lalina v vozon'akanjo blouse & tampon
Topy maso Dingana fohy Vondron-taonany: olon-dehibe Miralenta: Vehivavy Karazan-vokatra: Blaosy sy tampon'akanjon'ny halavany: Karazan-maodely tsy tapaka: Volom-boninkazo: Halavan'ny tanany voahodina (cm): Decorati feno ...
123456 Manaraka> >> Pejy 1/10